Somali News Tv » kulanka Doorka Dhalinyarada iyo Hanaanka dib u Eegista Dastuurka oo Muqdisho Lagu Qabtey
kulanka Doorka Dhalinyarada iyo Hanaanka dib u Eegista Dastuurka oo Muqdisho Lagu Qabtey
wasaarada dastuurka xukuumada federalka somaliya ayaa waxa ay maanta magaalada caasimada muqdisho waxa ay ku qabatay kulan looga maacdaray Doorka dhalanyarada iyo hanaanka dib u eegista dastuurka somaliya.
kulankan ayaa waxaa ka soo qeyb galay xubno ka kala socda labada aqal ee baarlamanka agaasimaha guud ee wasarada dastuurka iyo xubno qeyb ka ah gudiga dib u eegista dastuurka somaliya.
waxaana su’aalo ku qotomada Doorka dhalanyarada iyo hanaanka dib u eegista dastuurka somaliya weydiinayay qaar ka mid ah bulshada rayidka ee kulankaasi qeybta ka ahaa.
ugu horey kulanka waxaa ka hadlay agaasimaha wasaarada dastuurka maxamed abuukar subeyr waxa uuna shaaca ka qaaday in inta lagu guda jiro dib u eegista dastuurka laga tashan doono maqaamka muqdisho waxa uuna ku nuux nuuxsaday in arimahaasi oo idil ay go’aan ka garai doonaan dowlada somaliya iyo maamul goboeedyada dalka ka jira.
Dhanka kale qaar ka mid ah xildhibaanada ka trsan baarlamanka labada aqal ayaa bogaadiyey hanaanka dib u eegista dastuurka somaliya.
kulan ayaa daba jooga kulamo horey ay wasaarada dastuurka sidan oo kale ay ugu qabatay magalada muqdisho kaasi oo ay ka qeyb ahaayeen wasaaradahada dastuurka maamul goboleedyada waxaana ujeedka kulamadaasi ay ahaayeen tababaro iyo wadatashi ay wasaarada dastuurka ay ka sameneysay Dastuurka somaliya